Jese Rodriguez oo FARIIN Qiiro leh u soo diray Wiilkiisa oo Dhicisnimo ku dhashay!! – Gool FM
Jese Rodriguez oo FARIIN Qiiro leh u soo diray Wiilkiisa oo Dhicisnimo ku dhashay!!
Byare September 13, 2017
(Europe) 13 Sebt 2017. Xiddigii hore ee Real Madrid iminkana u safta naadiga Stoke City ee Premier League Jese Rodriguez ayaa fariin aad u qiiro badan baraha Bulshada u soo dhigay wiilkiisa oo Dhicisnimo ku dhashay.
Wuxuu soo qaatay Sawirka wiilkiisa NYAN isagoo madaxa ka shubinaya wuxuuna soo daba dhigay qoraalkan:
“Waa Been hadduu aduunka aaminsan yahay inaadan aad u fiicnayn.
“Maalin kasta oon jooga dhinacaaga waxbaan kaa baran doonaa, awoodaada, rabitaankaaga, dabeecadaada ah inaan wax laga niyad jabin, naxariistaada, khatartaada sida aad u yartahay iyo sida aad u dhibtooneyso.
A post shared by Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10) on Sep 13, 2017 at 3:57am PDT
“Had iyo jeer farxad ayaad I siin dontaa. Mahadsanid NYAN.
“Inbadan ayaan ordi doonaa si aan u dhaliyo goolal badan iyo wax kasta oo uu aabe sameyn karo, kaliya si uu u arko caruurtiisa oo guriga ku dhoola caddeynaysa.
“Midaa ayaan sameyn doonaa iyo inkabadan Dagaalyahankeygiyoow, markasta waan kula jiri doonaa.
“Wax kasta way hagaagi doonaan waxaana markasta joogi doonaa dhinacaaga.”.
Franck Ribery oo markale caddeeyay inuu yahay qof heysta Diinta Islaamka…+SAWIRRO
GOOGOOSKA: Tottenham vs Borussia Dortmund 3-1 (Shaxda sugan)